Iwu nzuzo - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Golden Laser ga na-asọpụrụ ma na-echebe nzuzo gị. Anyị ga-echebe ọ bụla ozi na ị na-enye mgbe ị gara na nke a website.
01) Ozi collection
a website, ị pụrụ ịnụ ụtọ ihe ọ bụla ọrụ nye, dị ka ịtụkwasị iji, na-enyemaka, nbudata faịlụ na-ekere òkè na-eme. Tupu ị na-aga site na, ị na-chọrọ dejupụta gị onwe onye Ama bụ nke anyị pụrụ ezitekwara adabara oke na ntọhapụ na-agbata n'ọsọ na ị ma ọ bụrụ na ọ bụla.
Anyị na-causelessly upgrading anyị ọrụ na ngwaahịa (gụnyere ndebanye) izute gị mkpa. Ọ bụrụ na o kwere omume, anyị na-ga-mkpa na ihe Ama banyere gị ụlọ ọrụ, ahụmahụ na ngwaahịa na kọntaktị ụzọ.
02) Ozi ojiji
All gị info a web ga-isiike nchebe. Site Ama, anyị Golden Laser ga-enye gị mma na ngwa ngwa ọrụ. Mgbe ụfọdụ, anyị nwere ike na-agwa gị ọhụrụ ahịa nnyocha na ngwaahịa Ama.
03) Ozi Control
Anyị nwere iwu ọrụ iji chebe ozi ọ bụla anyị na-anakọta si n'aka gị, tinyere nzaghachi ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ. Ya bụ, ma e wezụga Golden Laser dịghị ihe ọ bụla ọzọ ga-enwe gị ozi.
Site n'ịkpakọba gị ozi site na web na tụnyere data si ọzọ, anyị ga-ike ikwu gị ngwaahịa na ọrụ.
Cheta na: Ndị ọzọ na njikọ nke a website, na-ejere gị ozi dị ka mma na ga gị nke a website, nke pụtara anyị Golden Laser agaghị iche ọ bụla ibu ọrụ n'ihi na ihe omume gị na ozi ndị ọzọ weebụsaịtị. Ya mere ọ bụla na ndetu banyere njikọ nke atọ akụkụ webs ga-apụghị na nzuzo a akwụkwọ.
04) Ozi Security
Anyị zubere iji chebe gị zuru ezu ọmụma, na-ezere ida, n'ụzọ, n'enweghị ikike nleta, ehi ehi, ime ihe ike na ichegbu. All data anyị ihe nkesa na-eche nche site firewall, na paswọọdụ.
Anyị nwere obi ụtọ dezie ozi gị ma ọ bụrụ na gị mkpa. Mgbe mgbanwe, anyị ga-ezitere gị nri zuru ezu site email gị ego.
05) Kuki ojiji
Kuki na-iberibe data na-kere mgbe ị gara na anyị website na nke na-echekwara na kuki ndekọ nke gị na kọmputa. Dịghị mgbe ha ga-ebibi ma ọ bụ na-agụ data na kọmputa gị. Kuki buo paswọọdụ gị na-agagharị mma nke ga-quicken gị Farisii ka anyị web na oge ọzọ. Ọzọkwa ị nwere ike jụ kuki ma ọ bụrụ na ị na-achọghị.
06), kpọsaanụ mgbanwe
Interpretation nke nkwupụta a na website ojiji na-ekesịpde site na Golden Laser. Ọ bụrụ na a na iwu nzuzo mgbanwe n'ụzọ ọ bụla, anyị ga-edowe emelitere version na peeji a na-ekwukwa na ụbọchị na n'okpuru nke na peeji a. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga-etinye a makeable ịrịba ama na web-agwa gị.
Ọ bụla esemokwu mere site na nkwupụta a ma ọ bụ website ojiji ga-erube isi kwekọrọ ekwekọ iwu nke Ndị mmadụ Republic of China.